Maitiro ekugadzirisa Yakazara Rima Mode muLibreOffice | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekumisikidza Yakazara Rima Mode muLibreOffice
Yemahara multiplatform hofisi suite, LibreOffice, yabva kure kure munguva dzichangopfuura. Iri kuratidza mwero wakakura wekukura uye mashandiro enzvimbo dzekugadzira. Uye zvakare, ikozvino iwe unogona zvakare kusarudza yakasviba modhi kune avo vanofarira iwo akasviba matoni zvirinani, kungave kune yakapusa aesthetics kana kudzora kutaridzika kwekushushikana kana iwe ukapedza nguva yakareba yenguva pamberi pekona uchishanda neiyi suite.
Mamwe maLinux distros, akadai seUbuntu, anouya ne maitiro erima, izvo zvinoita kuti zvinhu zvive nyore kwazvo uye nekumisikidza iyi modhi padanho repamusoro, maapplication anoitsigira anozochinja oenda kune iyo yakasviba maficha. Asi kana iwe usina distro neiyi modhi, kana iwe uchida kungoisa iyo yakasviba modhi muLibreOffice, pasina kukanganisa mamwe mapurogiramu, ipapo mune ino dzidziso iwe uchaona maitiro aungaite izvozvo ...
Uye zvakare, haungowana chete semi-yakasviba modhi senge yemamwe madingindira, asi a yakazara rima modhi. Kuti uite izvi, tevera nhanho idzi:
Vhura imwe chirongwa LibreOffice, seMunyori wezwi processor.
Wobva wadzvanya pamenyu Tools.
Dzvanya Mavara ekushandisa.
Sarudza iyo dema mune sarudzo Gwaro rekumashure y Kunyorera kumashure.
Zvino, kana iyo icons ivo havasi mune rakasviba ruvara, unogona kuchinja izvi kubva kumenu Zvishandiso> Sarudzo> Wona> Icon maitiro uye sarudza imwe yakasviba tema. Dingindira rinobva pane zvaunazvo maererano nekugovera kwako ...
Nenzira kana uri kushandisa Flatpak kune yako LibreOffice, ipapo zvirokwazvo iwe unogona kuona iyo musoro nzvimbo yakachena. Kuti ugadzirise izvo, iwe unogona kuita zvinotevera:
Vhura imwe yemapurogiramu LibreOffice.
Enda ku Zvishandiso> Sarudzo> Kuita munhu.
Ikoko sarudza imwe yeiyo pre-akaisa madingindira kuti unofarira (rima). Izvo hazvizove zvitema zvachose, asi zvirinani zvichave zvirinani kupfuura nakare ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekumisikidza Yakazara Rima Mode muLibreOffice
Pasina kunyepedzera kukanganisa basa rinoitwa neLibre Office vanogadzira, ndinofanira kubvuma kuti handitomboishandisa nekuti, kunze kwekuti kuenderana kwayo neMS Office hakusi padanho reimwe nzira senge Hofisi chete kana Mahara Hofisi, iyo ine chinongedzo icho, mumaonero angu, chinotyisa -kunyangwe kuisa sarudzo yeribhoni / omnibarra-. Kuwedzera iyo yerima modhi kufambira mberi kudiki, asi ivo vanoda imwe shanduko yekushanduka
WINE 6.0-rc1 ikozvino yave kuwanikwa, inosvika neyakagadziridzwa Gecko injini uye inopfuura mazana mana neshanduko